Raid – Page 3 – Filimside.net
Rasmi: filimka Raid oo ganacsi wacan sameeyay Jimcadiia labaad
March 24, 2018 Zakarie Abdi
Superstar Ajay Devgn filimkiisa Raid ayaa ganacsi wacan sameeyay Jimcadiisa labaad si wacana isku celiyay madaama uu keenay 3.25 Crore (Trade Figure) sida shabakada BOI soo daabacday. Filimka Raid wuxuu sameeyay 65% hoos u dhac ah waxaa fiicneyd […]
BOI: Filmka Hichki Si Hoose Ayuu Ku Furmay Saaka Subaxi Hore Xiliga India
March 23, 2018 Ali Aadan
Rani Mukerji filmkeda Hichki ayaa saaka subaxi hore xiliga India si hoose ku furmay waxuuna ku furmay saakadii hore 10-15% waana hoos udhac weyn. Balse lalama yaabayo maadama aflaamta noocan oo kale ah iska caadeysteen inee […]
Rasmi: Filmka Raid Iyo Mudo Hal Todobaad Ah Ganacsiga Uu Gudaha India Ka Sameyay!
Filmka Raid ayaa ganacsi wacan sameyay todobaadkisa kowaad asigoo waliba dhaafay ganacsigii laga filaayey keenayna mid kabadan. Raid todobaadkisa kowaad waxuu keenay 60.50 Crore (Trade Figure) sida shabakada BOI soo daabacday waxuuna sidaas ku noqday […]
Rasmi: filimka Raid iyo maalintiisa lixaad ganacsiga uu gudaha Hindiya ka sameeyay
Superstar Ajay Devgn filimkiisa Raid ayaa diidan inuu wax gaabis ah muujiyo madaama uu keenay 5 Crore (Trade Figure) arbacdiisa kowaad wuxuuna mudo lix maalmood ah soo xareeyay 56.85 Crore (Trade Figure). Raid wuxuu noqday mashruuc guul wacan […]
Da 6 Update: filimka Raid iyo Arbacadiisa kowaad ganacsiga uu sameeyay maal maha shaqada culees kuma noqonin
March 21, 2018 Zakarie Abdi
Superstar Ajay Devgn filimkiisa Raid culees kuma noqonin maal maha shaqada madaama Isniin ilaa Arbaco uu filimkaan ganacsi wacan sameenayo halka sedexdiisii maalmood ee hore ganacsi heer sare ah uu sameeyay. Raid ayaa la filaa […]
Rasmi: filimka Raid iyo Talaadadiisa kowaad ganacsiga uu sameeyay guusha wuu gaaray Hit ayaan sugeynaa inuu noqdo
Superstar Ajay Devgn filimkiisa Raid ayaa guul wacan ku gaaray mudo 5-maalmood ah asigoo Boxoffice-ka kasoo xareeyay 51.50 Crore (Trade Figure). Sida shabakada BOI soo daabacday filimka Raid ayaa keenay 5.50 Crore (Trade Figure) Talaadadiisa kowaad waana ganacsi […]
Day 5 Update: filimka Raid cidna ma celin karto ganacsi adag ayuu sameenayaa Talaadadiisa kowad
March 20, 2018 Zakarie Abdi
Superstar Ajay Devgn filimkiisa Raid maalintii Isniinta ahayd ganacsi xoogan ayuu sameeyay asigoo ka gudbay tijaabadii maalmaha shaqada. Maanta oo Talaado ahna Raid kaliya wuxuu sameeyay 10% ganacsi ahaan marka lala bar bar dhigo midkii […]
Imisa lacag ah ayuu filimka Raid suuqyada caalamka kasoo xareeyay sedexdiisa maalmood ee ugu horeyso
Superstar Ajay Devgn filimkiisa Raid ayaa ganacsi heer sare ah gudaha Hindiya ka sameenayo sidoo kalena ganacsi dhex dhexaad ah ayuu suuqyada caalamka ka sameeyay sedexdiisa maalmood ee ugu horeyso. Devgn filimkiisa Raid ayaa keenay $975,000 […]
Rasmi: Raid oo ganacsi adag la yimid Isniintiisa kowaad Ajay Devgn oo helay filim guuleestay
Superstar Ajay Devgn filimkiisa Raid ayaa la yimid ganacsi aad u adag Isniintiisa kowaad weliba xalay shabakada BOI fagtii hore waxay ku qiyaastay in Raid 5.50 Crore ganacsigiisa yahay Isniintiisa kowaad balse ganacsi ka sareeyo […]
BOI: Filimka Raid oo is celiyay Isniintiisa kowaad iyo halka uu hiigsan karo
March 19, 2018 Zakarie Abdi
Shabakada Boxoffice India ayaa warbixin kasoo daabacday filimka Raid iyo ganacsiga uu sameeyay Isniintiisa kowaad ama maalintiisa afaraad. Raid ayaa sameeyay 40% ilaa 45% hoos u dhac Isniintiisa kowaad marka lala bar bar dhigo Jimcadii […]